05/04/2018 - Page 2 sur 4 -
Seranam-piaramanidina Ivato : Lehilahy nitondra sokatra 26 nifanenjehana tany an-tanimbary
Nifanenjehan’ny zandary hatrany anaty tanimbary ny lehilahy iray nitondra baoritra nisy zana- tsokatra miisa 26 teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ny talata lasa teo tokony ho tamin’ny 11ora sy 25 minitra alina. Araka ny loharanom-baovao avy …Tohiny
Faritra Ihorombe : Nomarihana tao anaty firaisankina ny faha-71 taonan’ny tolom-panafahana
Tolom-panafahana 1947 : Firaisankina ho fisandratan’i Madagasikara, no lohahevitra nanamarihana ny faha-71 taonan’ny tolom-panafahana tamin’ity taona ity. Ho an’ny tao amin’ny Faritra Ihorombe, dia nisy ny famelomana an’izay firaisankina ho amin’ny Fisandratana izay. Tamin’io andron’ny …Tohiny
Rn4 sy Rn2 : Efa miverina ny fifamoivoizana
Nisy fanamboarana ny lalam-pirenena Rn2, mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina, teo amin’ny tetezan’i Mangoro, Pk 94+250, omaly, izay naharitra ora 4, izany hoe nanomboka tamin’ny 10 ora maraina ary tsy nifarana raha tsy tamin’ny 2 ora …Tohiny
Antsirabe : Telo lahy nidoboka am-ponja
Niatrika raharaham-pitsarana tao amin’ny ambaratonga voalohany teto Antsirabe izy telo lahy nidoboka am-ponja ireto ny faramparan’ny herinandro lasa teo. Taorian’ny raharaha natrehiny dia nanolotra valopy tamina mpiasan’ny fitsarana izy ireo izay heverina ho fisaorana izy …Tohiny
Mitohy ary mihamafy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana frantsay sy ny fanjakana malagasy. Porofon’izany ny fisiana sy fandefasana zandary mandeha manaraka fiofanana any amin’ny “Ecole de guerre” any Frantsa isan-taona, izay raisin’ity firenena ity ...Tohiny